Maxaa ka soo kordhay wada hadaladii la xiriira sii deynta C/raxmaan C/shakuur – Hornafrik Media Network
Maxaa ka soo kordhay wada hadaladii la xiriira sii deynta C/raxmaan C/shakuur
Wada hadalo iyo shirar is daba joog ah oo looga hadlayo xalka sii deynta Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ayaa tan iyo galabta ka socda magaalada Muqdisho, iyadoo wada hadaladan ay marba marxalad ay galayaan.
Dadaalada loogu jiro sii deynta C/raxmaan C/shakuur ayaa waxaa gelinkii dambe ee maanta hor-boodayay Odayaasha dhaqanka oo ay hoggaaminayeen Imaam Maxamed Yuusuf iyo Ugaas Maxamuud Cali Ugaas oo Madaxda dowladda ka dalbaday in lagu soo wareejiyo C/raxmaan C/shakuur, iyadoo aan Maxkamad la tagin.
Waxaa dadaalada ugu weyn ee ay furaha u ahaayeen Odayaasha dhaqanka uu ujeedkiisa ahaa in kiiska xarigga C/raxmaan C/shakuur lagu dhameeyo xal, isla markaana lagu soo wareejiyo caawa, iyadoo la geynayo guri ku yaal degmada C/casiis oo ay ku sugan yihiin Duubabka dhaqanka.
Sidoo kale wada hadalo kale oo ay hoggaaminayeen Madaxweynayaasha Maamulada Galmudug, Hirshabeelle Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waxaana wehliyay Wasiirka Amniga Ducaale, Wasiirka Arrimaha Dibadda Yuusuf Garaad, Wasiir Axmed Qor-qoor iyo Xildhibaano, ayaa waxay Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha kala hadleen arrimaha xalka sii deynta C/raxmaan C/shakuur iyo sidii dowladda u soo afjari laheyd kiiskiisa.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka oo qeyb ka ah dadaalada socda oo codsaday in aan la sheegin magacyadooda, ayaa sheegay in arrimaha qaar ee la xiriira sii deynta Siyaasiga la isku mari waayay, isla markaana uu shuruudo ku xiray sii deyntiisa, hadii aan Maxkamad la mareyn. Wuxuuna Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur ku adkaysanayaa in Warqad lagu cadaynayo inay qalad ahayd wixii dhacay in loo qoro, ama Maxkamad la isla aado.
Waxaa hada la sheegayaa in Madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabeelle, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Wasiirada ay ugu tageen C/raxmaan C/shakuur halka uu ku xiran yahay ee xarunta Nabadsugida, iyadoo wada hadalo u socdaan.
Dadaalada ugu weyn ee socda ayaa ah sidii arrinta taagan xal lagu dhameyn lahaa, iyadoo aan berri la aadin Maxkamad, isla markaana kiiska dowladda soo afjarto, balse waxaa la ogeyn qaabka loo dhigi doono iyo in dowladda ay war cad ka soo saari doonto.
Dhinaca kale Odayaasha dhaqanka ee dadaaladan qeybta ka ahaa ayaa iyana la sheegayaa inay wali ka war-sugayaan wada hadalada socda, isla markaana rajo ka qaba in ugu dambeyn caawa C/raxmaan C/shakuur lagu soo wareejiyo.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo La Sii Daayay, Iyadoona lagu heshiiyay in Maxkamad lagu kala baxo+Sawir